မင်းသားကြီး Tom Cruise ကို တစ်ပွဲတစ်လမ်း စိန်ခေါ်လိုက် တဲ့ Justin Bieber ရဲ့ လုပ်​ရပ်​ .... » MPA
မင်းသားကြီး Tom Cruise ကို တစ်ပွဲတစ်လမ်း စိန်ခေါ်လိုက် တဲ့ Justin Bieber ရဲ့ လုပ်​ရပ်​ ….
ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့မှာတော့ Justin Bieber က ထူးထူးဆန်းဆန်းစာတစ်ခုကိုရေးပြီး သူရဲ့ တွစ်တာမှာရေးတင်ခဲ့ပါတယ်။
အသက်၂၅ နှစ်အရွယ် Justin Bieber ကတော့ အက်ရှင်မင်းသားကြီး Tom Cruise ရဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို အကြည့်များပြီး အသက် ၅၆ နှစ်အရွယ် Tom Cruiseနဲ့ တစ်ပွဲတစ်လမ်းနွှဲဖို့ စိတ်ကူးပေါက်သွားခဲ့ပုံပါပဲ။ သူကတော့ Tom Cruise ကို တစ်ပွဲလောက်နွှဲဖို့အတွက်စိတ်ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကတော့ Justin Bieber တစ်ယောက် ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲလို့ မေးခွန်းထုတ်နေကြပါပြီ။ Justin Bieberကတော့ ” Tom Cruise နဲ့ octagon မှာ တစ်ပွဲတစ်လမ်းနွှဲဖို့အတွက် စိန်ခေါ်ချင်တယ်။
ဒီစိန်ခေါ်မှုကို လက်မခံရင်တော့ ကြောက်တတ်တဲ့သူအဖြစ်နဲ့ အတိတ်ကိုစဉ်းစားတိုင်း အရှက်ရနေတော့လိမ့်မယ် Tom. ဒီပွဲကို ဘယ်သူ ဘယ်သူ ပါချင်သေးလဲ ” လို့ရေးထားပြီး UFC ရဲ့ ခေါင်းဆောင် Dana White ကိုလည်း mention ခေါ်ထားပါသေးတယ်။
Justin ကတော့ လက်ဝှေ့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ခံပညာလည်းတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ Tomကတော့ ကိုယ်ပိုင်စတန့်ကွက်တွေဖန်တီးနေတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် တော်တော်လေးလည်း အကြမ်းခံတဲ့ မင်းသားတစ်ယောက်ပါ။
ပရိသတ်တွေကတော့ Justin က ဘာများ ရမှာမလို့ ဒီလိုUFC ဆန်ဆန်ပြိုင်ပွဲလုပ်ပြီး ဖိုက်ချင်နေရတာလဲလို့ စိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်။ ပရိသတ်တော်တော်များများကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အမြင်မကြည်တဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေနဲ့ ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
ဇှနျလ ၉ ရကျနမှေ့ာတော့ Justin Bieber က ထူးထူးဆနျးဆနျးစာတဈခုကိုရေးပွီး သူရဲ့ တှဈတာမှာရေးတငျခဲ့ပါတယျ။
အသကျ၂၅ နှဈအရှယျ Justin Bieber ကတော့ အကျရှငျမငျးသားကွီး Tom Cruise ရဲ့ အကျရှငျဇာတျကားတှကေို အကွညျ့မြားပွီး အသကျ ၅၆ နှဈအရှယျ Tom Cruiseနဲ့ တဈပှဲတဈလမျးနှဲဖို့ စိတျကူးပေါကျသှားခဲ့ပုံပါပဲ။ သူကတော့ Tom Cruise ကို တဈပှဲလောကျနှဲဖို့အတှကျစိတျချေါခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှကေတော့ Justin Bieber တဈယောကျ ဘာတှဖွေဈနပွေီလဲလို့ မေးခှနျးထုတျနကွေပါပွီ။ Justin Bieberကတော့ ” Tom Cruise နဲ့ octagon မှာ တဈပှဲတဈလမျးနှဲဖို့အတှကျ စိနျချေါခငျြတယျ။
ဒီစိနျချေါမှုကို လကျမခံရငျတော့ ကွောကျတတျတဲ့သူအဖွဈနဲ့ အတိတျကိုစဉျးစားတိုငျး အရှကျရနတေော့လိမျ့မယျ Tom. ဒီပှဲကို ဘယျသူ ဘယျသူ ပါခငျြသေးလဲ ” လို့ရေးထားပွီး UFC ရဲ့ ခေါငျးဆောငျ Dana White ကိုလညျး mention ချေါထားပါသေးတယျ။
Justin ကတော့ လကျဝှကြေှ့မျးကငျြတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး ကိုယျခံပညာလညျးတတျတဲ့သူတဈယောကျပါ။ ဒါပမေဲ့ Tomကတော့ ကိုယျပိုငျစတနျ့ကှကျတှဖေနျတီးနတေဲ့ မငျးသားတဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ တျောတျောလေးလညျး အကွမျးခံတဲ့ မငျးသားတဈယောကျပါ။
ပရိသတျတှကေတော့ Justin က ဘာမြား ရမှာမလို့ ဒီလိုUFC ဆနျဆနျပွိုငျပှဲလုပျပွီး ဖိုကျခငျြနရေတာလဲလို့ စိတျဝငျစားနကွေပါတယျ။ ပရိသတျတျောတျောမြားမြားကတော့ ဒီကိစ်စနဲ့ပတျသတျပွီး အမွငျမကွညျတဲ့ ဝဖေနျခကျြတှနေဲ့ ပွောဆိုနကွေပါတယျ။